Mety hisy fitohanana eo amin'ny Internet, noho ny fitokanana manerantany an'i Covid-19 | Avy amin'ny Linux
Fanokanan-tena, fisintahana ara-tsosialy ary karokantin vokatry ny areti-mifindra coronavirus (Covid-19) dia manery olona mihabetsaka hitodika amin'ny Internet ho an'ireo hetsika izay natao taloha: asa, fianarana, fitsaboana, na fialamboly fotsiny.
Io dia manery ny fotodrafitrasa sy serivisy serivisy satria sahirana izy ireo hanaraka ny fitakiana mitombo. Na izany aza, mino ny manam-pahaizana sasany fa tokony ho zakan'ny fotodrafitrasa tambajotra io fiakarana tampoka amin'ny fangatahana amin'ny Internet io.
Amin'izao fotoana izao, ireo hetsika izay mibahana ny fantsom-pifandraisana avo indrindra dia mifandraika amin'ny serivisy streaming video nomen'ny orinasa toa ny YouTube, Netflix, Twitch, Prime Video ary ny hafa, dia nanamarika ny fitomboana tampoka teo ary naneho hevitra fa ny fahita matetika amin'ireo serivisy ireo dia mety hiteraka fitohanana sy tsy fahombiazan'ny tambajotra.
Talohan'izay YouTube sy Netflix dia nanapa-kevitra ny hihetsika hisorohana ny olana mety hitranga amin'ny fitohanana Amin'ny Internet.
Raha ny marina, araka ny tatitra natolotra tamin'ny taona 2019 avy amin'ny orinasa studio Sandvine, Ny fanjifana votoaty amin'ny Internet dia mitentina mihoatra ny 60% amin'ny totalin'ny volany ny fifamoivoizana an-dàlambe, ny YouTube sy ny Netflix dia mitentina eo amin'ny 21% amin'ity volabe ity.
Mifanaraka amin'izany, ny fandinihana ny tranokala Nielsen dia mampiseho izany ny fijanonan'ny olona ao an-trano noho ny areti-mandringana COVID-19 mety hitarika fitomboana efa ho 60% amin'ny habetsahan'ny atiny hitany amin'ny tranga sasany ary mety miankina bebe kokoa amin'ny antony.
Ny serivisy mivantana toy ny Disney Plus, Netflix, Hulu, ary ny karazana fialamboly mivantana, ao anatin'izany ny lalao an-tserasera, dia hitombo rehefa mijanona ao an-trano mandritra ny fotoana maharitra ny olona.
Ao amin'ny lahatsoratra bilaogy, Cloudflare nanamarika izany ny teboka aotra amin'ny fampielezana coronavirus any Etazonia nahita fitomboana manodidina ny 40% amin'ny fampiasana internet hatramin'ny nanombohan'ny krizy. Ny fifanakalozana Internet lehibe tany an-tanàn-dehibe toa an'i Amsterdam, London ary Frankfurt dia niaina fiakaran'ny fifamoivoizana 10-20% hatramin'ny 9 martsa.
Mihetsika i Netflix mba hisorohana ny fitohanana
Ao anatin'io toe-javatra io no Nitatitra ny CNBC fa ny iraky ny Vondrona eropeana dia nihaona tamin'i Reed Hastings, tale jeneralin'ny Netflix. Nifantoka tamin'io ny dinika vahaolana azo atao hanamaivanana ny fangatahana Internet amin'ny serivisy ilaina, manoloana ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny.
Ny kaomisera eropeana tompon'andraikitra amin'ny tsena niomerika sy ny tsena anatiny, Thierry Breton, nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny fampandehanana tsara ny Internet, indrindra amin'ny fotoanan'ny valanaretina coronavirus sy fitokanana maharitra ny olona.
Nanintona ny fahatsapan'ny tsirairay ny andraikiny izy tamin'ny alàlan'ny sioka iray izay nanolorany ny laharam-pahamehana ny tsirairay amin'ny famahana ny efijery SD mandritra ny fotoam-pilalaovana video na hanararaotra ny atiny multimedia hita amin'ny Internet.
Nandritra io fifanakalozana io dia a fampandehanana vaovao izay hampihena ho azy ny vahaolana amin'ny lafiny mpampiasa (ary amin'ny alàlan'ny fanitarana, ny taha kely) ho amin'ny famaritana mahazatra amin'ny fotoana fampiasana internet avo. Taorian'izay dia nanamafy tamin'ny tranokala Numerama i Netflix fa hametra ny kalitaon'ny fampielezam-peo any Eropa mandritra ny 30 andro.
"Taorian'ny fifanakalozan-kevitra teo amin'i Thierry Breton sy Reed Hastings, ary noho ireo fanamby tsy mbola nisy toa izany mifandraika amin'ny fihanaky ny coronavirus, dia nanapa-kevitra ny Netflix fa hampiadana ny renirano rehetra any Eropa mandritra ny 30 andro.
Araka ny vinavinany, izany dia mitontongana hatrany amin'ny 25% ny fivezivezena, ary mitazona serivisy manara-penitra ho an'ireo mpanjifantsika, "hoy ny mpitondra tenin'ny Netflix momba an'ity olana ity.
Ity fepetra ity dia miampy ireo hetsika hafa natao nataon'i Netflix hatramin'ny 2011 hitazomana ny kalitaon'ny serivisy azo antoka sy azo ekena amin'ny faritra misy fantsom-pifandraisana ambany, ao anatin'izany ny fampiharana efa mahomby ny fitaovana fampandehanana adaptive izay manitsy avy hatrany ny kalitaon'ny onjam-peo araka ny fantsom-pifandraisana misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mety hisy ny fitohanana amin'ny Internet, noho ny fitokanana manerantany an'i Covid-19
Trump dia nanolotra drafitra hamoronana tranokala hiadiana amin'ny areti-mandringana Covid-19 ary nahagaga ny rehetra